Endrik'io pejy io tamin'ny 14 Desambra 2018 à 10:59
30 octets ajoutés , il y a 3 ans
Endrik'io pejy io tamin'ny 29 Novambra 2018 à 11:44 (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 14 Desambra 2018 à 10:59 (hanova) (esory)
Ny '''Tetiandro hebreo''' dia [[tetiandro]] ampiasaina ao amin'ny fivavahana jiosy sy ny fanjakan'i Israely ankehitriny. Tetiandro manaraka ny fihodin'ny [[volanaVolana]] sy ny [[masoandroMasoandro]] ny tetiandro hebreo, ka ny iray volana dia miovaova ho 29 na 30 andro. Misy iray volana fanampiny izay asisika isaky ny telo taona satria tokony ho feno ny tsingerim-potoana 19 taona atao hoe Tsingerin'i Metona<ref><small>I Metona dia filozofa grika velona tamin'ny taonjato faha-5.</small></ref>. Avy amin'io tetiandro io no nahazoana ny Tetiandro jiosy izay ampiasain'ny Fanjakana Israeliana.
Ny totalin'ny andro ao anatin'ny taona iray dia mety ho 353, 354 na 355. Marihina fa ny salan'ny taona manaraka ny fihodin'ny masoandroMasoandro dia maharitra 365 andro sy 1/4 eo ho eo.
Ny andro iray dia manomboka amin'ny filentehan'ny masoandroMasoandro. Ny herinandro dia manomboka amin'ny Alahady ary mifarana amin'ny Asabotsy. Ny iray volana (hebreo: חודש / ''hodesh'') dia manomboka amin'ny andro ahatsinanan'ny volanaVolana. Ny taona iray dia misy 12 volana nefa indraidray mety hisy 13 volana.
=== Ny anaran'ny andro ===
Misy fito andro ny ao anatin'ny iray [[herinandro]] (hebreo: / shavu'a) amin'ny tetiandro hebreo. Ny andro (hebreo: יום / yom) iray dia manomboka amin'ny filentehan'ny masoandroMasoandro ao amin'ny andro eo alohany (''Yom Shishi'' "andro fahenina" Zoma) fa tsy amin'ny misasak'alina. Tsy manana ny anarany manokana ny andro tsirairay fa antsoina amin'ny laharany ka ny mifanandrify amin'ny Alahady no andro voalohany ary ny mifanandrify amin'ny Asabotsy no andro fahafito. Ireto avy ireo anaran'andro na laharan'andro ao amin'ny herinandro ireo:
#''Yom Rishon'' / יום ראשון‬ izay midika hoe "andro voalohany" (Alahady)
Ao amin'ny [[Baiboly]] dia voalaza fa ny taona iray misy 12 volana araka ny hita ao amin'ny [[Boky voalohan'ny Mpanjaka]] sy ny [[Boky voalohan'ny Tantara]] (1Mpan. 4.7 sy 1Tant. 27.1-15) ary ny soratra ao amin'ny [[Bokin'ny Genesisy|Genesisy]] dia hoatry ny milaza fa ny volana tsirairay dia misy 30 andro (Gen. 7.11; 8.3-4; 8.13-14). Hafa ny anaram-bolana nampiasain'ny [[Hebreo (mponina)|Hebreo]] talohan'ny fahababoana fa tsy mitovy amin'ny ampiasaina amin'izao fotoana izao. Amin'ny ankapobeny dia ny laharan'ny volana ao amin'ny taona no natao anaran'ny volana. Misy anaram-bolana vitsy izay voalaza ao amin'ny Baiboly, dia ireo nogasina hoe ''Abiba'' (hebreo: אביב / Aviv na Abib), ''Ziva'' (hebreo: /Ziv), ''Etanima'' (hebreo: אֵתָנִים / Ethanim) ary ''Bola'' (hebreo: /Bul). Ny Abiba dia volana voalohany, ny Ziva no faharoa, ny Etanima no fahafito, ny Bola no fahavalo. Heverina ho avy amin'ny anaram-bolana kananita izy ireo.
Ny volana ''Aviv'' (midika ara-bakiteny hoe "lohataona") dia voaresaka ao amin'ny [[Bokin'ny Eksodosy]] sy ny [[Bokin'ny Deoteronomia]] (Eks. 12.2; 13.4; 23.15; 34.18; Deo. 16.1). Ny volana ''Ziv'' (midika ara-bakiteny hoe "fahazavana") dia voaresaka ao amin'ny [[Boky voalohan'ny Mpanjaka]] (1Mpan. 6.1; 6.37). Ny volana ''Ethanim'' (midika ara-bakiteny hoe "mahery", endrika milaza maro) dia voaresaka ao amin'ny Boky voalohan'ny Mpanjaka (1Mpan. 8.2). Ny volana ''Bul'' dia voaresaka ao amin'ny Boky voalohan'ny Mpanjaka (1Mpan. 6.38).
* Ny ''Shemini Atseret'' (hebreo:שְׁמִינִי עֲצֶרֶת‬ "valo andro fivoriana" na ''יּוֹם הַשְּׁמִינִי עֲצֶרֶת'' / ''Yom ha-Shemini Atseret'' "fetim-pamaranana amin'ny faha-valo andro"); anombohan'ny fotoana irotsahan'ny rononorana ao Israely; ankalazaina amin'ny 22 Tishri;
* Ny ''Simkhat Torah'' (hebreo: שמחת תורה '''/''' "hafalian'ny Lalàna"); ankalazana ny [[Torah]] ("Lalàna") ka itondrana am-pilaharana ny horonam-boky mirakitra azy; tanterahina amin'ny 22 sy 23 Tishri;
* Ny ''Khanukka'' (hebreo: חג החנוכה / ''Hag ha-Khanukka'' "fetin'ny fanorenana"); ahatsiarovana ny fitokanana indray ny alitara fanaovam-panatira ao amin'ny [[Tempolin'i Jerosalema|Tempoly]] faharoa ao Jerosalema, tamin'ny fiverenana amin'ny fanompoam-pivavahana jiosy, telo taona taorian'ny nandraran'i Antiokosy IV (Seleokida).
* manomboka amin'ny 25 Kislev hatramin'ny 2 Tevet;
* Ny ''Tu bi-Shevat'' (hebreo: ט"ו בִּשְׁבָט na חֲמִשָּׁה עָשָׂר בִּשְׁבָט / "dimy ambin'ny folo andron'ny Shevat"); taom-baovaon'ny hazo; ankalazaina amin'ny 15 Shevat;
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/960460"